COVID-19 Learning Updates (Last Updated 1/26/22) | Battle Creek Public Schools
At BCPS, the health and safety of our community are always our top priority. We know it’s hard to keep track of health and safety protocols and other updates given that things have constantly been changing for the past few years.
As we welcome students back for in-person instruction, we wanted to share some updates and reminders on the latest COVID-19 protocols and answers to some frequently asked questions below. This blog post will be updated regularly, so please feel free to bookmark it for future reference.
If you have any other questions or concerns, please contact your school office. For Spanish language support, please call (269) 419-1978. For Burmese language support, please call (269) 601-6029.
Not sure if your student needs to isolate or quarantine? Please use the chart on the right or click here to help determine the appropriate action. If you still have questions, please contact your school office.
Click here for COVID-19 student protocol (English)
Haga clic aquí para ver el protocolo de aislamiento y cuarentena de COVID-19 (Spanish)
COVID-19 ရောဂါမကူးစက်စေရန် သီးသန့်ထားခြင်း (QUARANTINE) & သီးခြားနေခြင်း (ISOLATION) နှင့်ဆိုင်သော သဘောတူညီချက် နှင့်ပတ်သက်၍ ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။ (Burmese)
Increased Staffing Supports
As school districts across the country continue to grapple with the effects of COVID-19 on staff availability, including at BCPS, you may notice some new faces at the front of your student’s classroom. We have deployed staff members across the district to help fill in where needed to ensure that there are certified teachers in every classroom as staff illnesses arise. Despite the difficult circumstances, BCPS remains committed to our goal of 100% success for every Bearcat.
Quarantine means thataperson who has been exposed to COVID-19 should stay home and away from others in order to prevent the spread of disease. Isolation means thataperson has tested positive for COVID-19 and should isolate at home, away from other members of their household who have not tested positive.
How is exposure to COVID-19 defined?
Exposure is defined as beingaclose contact to someone who has tested positive for COVID-19. According to the CDC,aclose contact is anyone who was within six feet of an infected person with one or more people not wearingamask, foratotal of 15 minutes or more overa24-hour period (for example, three individual five-minute exposures foratotal of 15 minutes).
What is considered as fully vaccinated?
Your student is considered fully vaccinated if they are two weeks removed from their second shot of the Moderna/Pfizer vaccine or the one-shot Johnson & Johnson vaccine. For more information about vaccines and booster shot eligibility, please click here.
How will I be notified if my student needs to quarantine?
If your student is identified as havingapotential exposure to COVID-19 by the Calhoun County Health Department, you will be notified by email and phone call. If you have not received direct communication from the school or public health department aboutaquarantine period for your child, then your student has not been identified asaclose contact and can return to school the following day.
What are the COVID-19 symptoms and what do I do if my student develops any?
Your child and all members of your household should screen daily for any of the following symptoms:
Headache coupled with other symptoms
If your student develops any of the symptoms above (even if they are vaccinated), they should get tested, contact your student’s health provider, and stay home from school and separate from others.
If your student receivesapositive COVID-19 test, please contact your school office to report the positive case as soon as possible and have your student begin isolating at home. Isolate for 10 days from start of symptoms (even if symptoms begin after the positive test) or from the date ofapositive test (if asymptomatic). If symptoms go away, your student may return to school with proof ofanegative test taken on the sixth day after symptoms began or after the positive test date.
Can my student test out of isolation or quarantine or do they need to do the full 10 days?
Yes, your student has the option to return to school with proof ofanegative test taken on the sixth day of quarantine or isolation. See the Student COVID-19 Quarantine & Isolation Protocol one-pager for specifics about different scenarios.
Do I need to show proof ofanegative test before my student can return to school after isolating or quarantining?
If your student completesafull, 10-day isolation or quarantine period, they do NOT need to show proof ofanegative test to return to school. If you would like your student to return to school withanegative test on the sixth day after isolation or quarantine began, you will need to fill out this form here. The student or parent/guardian can either email the form and an image of the student's negative test result to your school office, or hand it in to the school office along withaprinted copy of the negative test.
In order to end quarantine or isolation on the sixth day, does it matter if my student receivesaPCR test or an antigen test or does either one work?
Antigen tests can be at-home tests or taken atadoctor's office, while PCR tests are usually taken atadoctor's office to be analyzed inalab. To test out of quarantine early, feel free to use the antigen or PCR test. However, please note that the CCPHD does not recommend usingaPCR test to test out of isolation early because these tests can pick up non-infectious viral particles for up to 90 days after someone initially gets sick.
What if my student has already had COVID-19?
Even if your student has already had COVID-19 and completed their isolation period, they may still be required to quarantine if notified of exposure, depending on their symptoms and vaccination status. See the Student COVID-19 Quarantine & Isolation Protocol one-pager for specifics about different scenarios.
If my student is unvaccinated, do they have to quarantine or test every time they get exposed?
Yes, if your student is unvaccinated, they will need to quarantine any time they are exposed to COVID-19. They will have the option to return to school with proof ofanegative test taken on the sixth day after exposure. See the Student COVID-19 Quarantine & Isolation Protocol one-pager for specifics about different scenarios.
How will my student keep up with their classes if they need to quarantine or isolate?
Your student’s teacher will be reaching out directly to set your student up for remote learning while at home.
Are meals available for pickup if my student needs to quarantine?
Yes, ifastudent is quarantining or isolating, parents can reach out to Michelle Morrissey at mmorrissey@battle-creek.k12.mi.us to arrange for meal pickup.
Where do I getaCOVID-19 test for my student?
Please see here forafull map of COVID-19 testing sites in Calhoun County. Starting Saturday, January 15, 2022, FDA-approved, over-the-counter COVID-19 diagnostic tests may also be covered by all private health insurance. If you have questions about COVID-19 testing, please contact your school office.
Individuals age five and older are now eligible to receive the COVID-19 vaccine! Booster shots are also available for individuals who are 12 and older (Pfizer) or 18 and older (Moderna/Johnson & Johnson). Learn more here.
Where can my student get vaccinated?
For more information on other vaccination opportunities throughout Calhoun County, click here.
We would encourage as many students who are able to do so to get the COVID-19 vaccine to help slow the spread of the virus in our community, so we are able to safely continue in-person instruction. If you have questions or concerns about whether your family should consider receiving the vaccine, please reach out to your medical provider or pediatrician.
Foralist of frequently asked questions about the vaccine, visit allincalhoun.org or if you have other questions, please call the Calhoun County Public Health Department at (269) 969-6370.
Will in-person events at my student’s school take place as scheduled?
Events at BCPS facilities are limited to 100 individuals, and masks and social distancing are required. Please stay tuned for more information from your student’s principal regarding any upcoming events at your school.
Are athletic events still happening?
Athletics events and practices will continue as scheduled, but spectators at events will be limited to athletes’ parents or guardians only. At this time, no students or staff members will be permitted to attend.
ခေါင်းစဉ်- COVID-19 နှင့်ပတ်သက်ပြီး လေ့လာရန်သတင်းအချက်အလက်အသစ်များ (1/14/22 တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်)
BCPS တွင် မိမိတို့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေးသည် အမြဲတမ်း ပထမဦးစားပေးသောအရာ ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သော နှစ်များအတွင်း ပြောင်းလဲလျက်ရှိနေသော ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့် အခြားပြောင်းလဲနေသော အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမြဲတစေ လေ့လာရန် ခက်ခဲကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည် သဘောပေါက်ပါသည်။
လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီ စာသင်ခန်းများကို ပြန်လည်စတင်ရန် လိုအပ်လာပါသောကြောင့် COVID-19 နှင့်ပတ်သက်ပြီး လိုက်နာရမည့် အသိပေး၊ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းအသစ်များကို မကြာခဏ မေးမြန်းတတ်သည့် မေးခွန်းများနှင့် တစ်ပါတည်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ယခုဆောင်းပါးကို အကြောင်းအရာအသစ်များနှင့် အမြဲပုံမှန် ဖော်ပြပေးနေမည်မို့ နောက်ပိုင်းတွင်လည်း လေ့လာဖတ်ရှုရန် စာမျက်နှာကို ကြိုတင်မှတ်သားထားဖို့ အကြံပြုလိုပါသည်။
အခြားမေးခွန်းများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို (269) 965-9481 မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ စပိန်ဘာသာ စကားဖြင့် မေးမြန်းပြောဆိုလိုပါက (269) 419-1978 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး မြန်မာစကားအတွက် (269) 601-6029 သို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ။
ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) (Quarantine) ဝင်ရန်နှင့် တစ်ဦးတည်းခွဲနေရာတွင် လိုက်နာရမည့်အရာများ
မိမိကျောင်းသူကျောင်းသား အနေဖြင့် ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်ရန် (သို့) တစ်ဦးတည်းခွဲနေရန် ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ဘူး ဖြစ်နေပါသလား။ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စစ်ဆေးပြီး အသင့်တော်ဆုံး ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသား
သင့်ကလေးတက်ရောက်သော စာသင်ကျောင်း ၏ ရုံးသို့အကြောင်းကြားပေးပါ။
တိုးပွားလာသော ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် အကူအညီ
ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူနှင့် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် မိမိမှတစ်ဆင့် အခြားသူများဆီသို့ ထပ်ဆင့်ကူးစက်မှု မဖြစ်စေရန် အိမ်တွင် သာနေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်သည်ကို ဆိုလိုပါသည်။ တစ်ဦးတည်း ခွဲနေခြင်း ဆိုသည်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရပြီဟု စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီးနောက် မိမိအိမ်တွင် ခွဲနေသည့်အပြင်၊ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရခြင်းမရှိသည့် အခြားသော မိသားစုဝင်များနှင့်ပါ အဆက်အသွယ် လုံးဝမပြုလုပ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်ခြင်းနှင့် တစ်ဦးတည်း ခွဲနေခြင်းမှာ မည်ကဲ့သို့ ကွာခြားသနည်း။
COVID-19 ကူးစက်ခံရခြင်း ရှိ၊မရှိ မည်ကဲ့သို့ သတ်မှတ်နိုင်သနည်း။
မိမိအနေဖြင့် ရောဂါကူးစက်ခံထားရခြင်း ရှိ၊မရှိ ခွဲခြားနိုင်သည်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ထားနှင့်သူနှင့် နီးကပ်စွာ ထိတွေ့၊ ပြောဆို၊ ဆက်သွယ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိ လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ CDCမှ တင်ပြချက်များအရ ရောဂါပိုး ရှိသူနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်ရှိခဲ့သည်ဟူသော အခြေအနေမျိုးသည် ထိုကူးစက်ခံရသူနှင့်6ပေအတွင်း နီးကပ်စွာ တစ်ဦးတည်း ဖြစ်စေ၊ အများနှင့် ဖြစ်ပါစေ ၁၅ မိနစ်ခန့် အတူတူ ရှိနေခဲ့ပါက၊ (သို့) ၂၄ နာရီထပ်ပိုမိုများပြားစွာ နှာခေါင်းစည်း မတပ်ပဲ ရှိနေခဲ့ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ (ဥပမာအားဖြင့် တစ်ယောက်ချင်းစီကို5မိနစ်ခန့်ဆက်တိုက် လူ3ဦးဖြင့် စုစုပေါင်း 15 မိနစ်ဆက်တိုက် ပြောဆိုဆက်သွယ်ခဲ့ပါက)
ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝ ထိုးနှံပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း မည်ကဲ့သို့ သတ်မှတ်နိုင်သနည်း။
မိမိ၏ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့် Moderna/Pfizer ကာကွယ်ဆေးများကို ဒုတိယအကြိမ် ထိုးနှံပြီး ၂ ပတ်ကျော်ပြီးနောက် (သို့) Johnson & Johnson ကာကွယ်ဆေးကို တစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီး ၂ ပတ်ကျော်ပြီးနောက်တွင် ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစားများနှင့် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး (booster shot) အကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်လေ့လာလိုပါက ကျေးဇူးပြုပြီး ဤနေရာ. သို့ သွားပေးပါ။
မိမိကျောင်းသူကျောင်းသားအနေဖြင့် ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်ရန် လိုအပ်ပါက မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် အသိပေးခံရမည်နည်း။
Calhoun ကောင်တီ ကျန်းမာရေး ဌာန အနေဖြင့် မိမိ၏ ကလေးငယ်မှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရမှု အလားအလာ ရှိနေသည်ဟု ယူဆပါက မိမိဆီသို့ အီးမေးလ် (သို့) ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိအနေဖြင့် ကျောင်း (သို့) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနမှ ကလေးငယ်၏ ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်ရမည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လာခြင်း မရှိသေးပါက မိမိကလေးငယ်မှာ ရောဂါကူးစက်ခံရသူနှင့် အနီးကပ်ဆုံး ရှိခဲ့သည့် စာရင်းထဲတွင် မပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် ကျောင်းသို့ ပုံမှန်အတိုင်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာများတွင် မည်သည်တို့ ပါဝင်သနည်း၊ မိမိကလေးငယ်တွင် ရောဂါလက္ခဏာများကို တွေ့ရပါက မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
မိမိကလေးငယ်သာမက တစ်မိသားစုလုံးအနေဖြင့် မိမိတို့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာများ ခံစားရခြင်း ရှိမရှိ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စစ်ဆေးနေရမည်ဖြစ်ပါသည်-
အနံ့အရသာ ခံနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း
ကိုယ်ပူချိန် 100 ဒီဂရီထက် ကျော်လွန်နေခြင်း
အမောဆို့ပြီး၊ အသက်ရူရ ခက်ခဲခြင်း
အခြားလက္ခဏာများနှင့် အတူတူ ခေါင်းကိုက်ခြင်း
(ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့်တိုင်) မိမိကျောင်းသားအနေဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုခုကို ခံစားနေရပါက ကူးစက်ခံရမှုကို ဆေးစစ်ခံပြီး၊ ကလေးငယ်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို ဆက်သွယ်ပြီး၊ ကျောင်းမတက်ခြင်း၊ အခြားသူများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း မပြုလုပ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
မိမိကလေးငယ်အနေဖြင့် ရောဂါကူးစက်ခံရကြောင်း အဖြေထွက်ပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အနေဖြင့် ရောဂါကူးစက်ခံရပါက သင့်ကလေးတက်ရောက်သော စာသင်ကျောင်း ၏ ရုံးသို့အကြောင်းကြားပေးပါ။ ရောဂါလက္ခဏ စတင်ခြင်းမှ ၁၀ ရက် ( အကယ်၍ ကူးစက်ခံရ မှုစစ်ဆေးခြင်းရှိပြီးမှ ရောဂါလက္ခဏစတင်ခဲ့လျှင်) သီးခြား ခွဲနေပါ။ အကယ်၍ ရောဂါလက္ခဏ များပျောက်ကင်းပြီး ၆ ရက်မြောက်နေ့တွင် စစ်ဆေးမှု အနုတ်လက္ခဏရရှိပါက ကျောင်းပြန် တက်နိုင်ပါသည်။
မိမိ ကလေးငယ်ကို ဆေးစစ်ခြင်းသည် ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ဦးတည်း ခွဲနေခြင်းကို အဆုံးသတ်နိုင်ပါသလား (သို့) 10 ရက်ပြည့်သည်အထိ နေထိုင်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
မှန်ပါသည်။ မိမိကလေးငယ်အနေဖြင့် ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်ပြီး (သို့) တစ်ဦးတည်း ခွဲနေပြီး6ရက်မြောက်နေ့တွင် ဆေးစစ်ပြီး ရောဂါကူးစက်ခံရမှုမရှိကြောင်း အထောက်အထားဖြင့် ကျောင်းပြန်တက်ရန် အခွင့်အလမ်း ရှိပါသည်။ ။ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးအတွက် အသေးစိတ် လေ့လာရန် ကျောင်းသား COVID-19 ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) နှင့် သီးခြားနေရန် စည်းမျဉ််းစည်းကမ်း စာတစ်မျက်နှာ တွင် သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်ခြင်း (သို့) တစ်ဦးတည်း ခွဲနေခြင်းပြီး ခြောက်ရက်မြောက်နေ့တွင် အဆုံးသတ်လိုပါက မိမိကလေးငယ်အတွက် PCR စစ်ဆေးမှု (သို့) antigen စစ်ဆေးမှုကိုသာလျှင် လက်ခံမည်လား၊ သို့မဟုတ် တစ်ခုခုနှင့် အဆင်ပြေပါသလား။
Antigen စစ်ဆေးမှုသည် နေအိမ်တွင် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ PCR စစ်ဆေး မှုများကို ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန် ဆရာဝန်၏ ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ကွာရန်တင်း (ရောဂါ ခြေချုပ်) ခြင်းမှ စောလျှင်စွာ ထွက်ခွာနိုင်ရန် antigen သို့မဟုတ် PCR စမ်းသပ်မှုကို အသုံးပြုပါ။ သို့ရာတွင် CCPHD သည် သီးခြားနေခြင်းမှ စောလျှင်စွာထွက်နိုင်ရန် PCR စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထား ခြင်း မရှိကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပေးစေလိုပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဤစစ်ဆေးမှုသည် လူတစ်ဦးဦး ဖျားနာပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၉၀ အထိ ကူးစက်နိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်သော အမှုန်အမွှားများကို ရရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ ကျောင်းသားသည် ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်ခြင်း (သို့) တစ်ဦးတည်းခွဲနေခြင်း ပြီးသည့်နောက် ရောဂါလက္ခဏကင်းစင်ကြောင်း အထောက်အထားပြရန် လိုအပ်ပါမည်လား?
သင့်ကလေးအနေဖြင့် ၁၀ ရက်ကြာအောင် ရောဂါမကူးစက်စေရန် သီးသန့်ထားခြင်း (ကွာရန်တင်း) သို့မဟုတ် တစ်ဦးတည်း ခွဲနေခြင်း တို့ပြုလုပ်ပြီးပါက ကျောင်းပြန်တက်သောအခါ ရောဂါလက္ခဏကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေအထောက်အထားပြရန် မလိုပါ။ တစ်ဦးတည်းခွဲနေခြင်း သို့မဟုတ် ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) စတင်ပြီး ၆ ရက်မြောက်သောနေ့တွင် သင့်ကလေး၌ ရောဂါကင်းစင်ကြောင်း လက္ခဏစစ်ဆေးမှုတွေ့ရှိပြီး ကျောင်းပြန်တက်လိုပါက၊ ဤဖောင်ကို (fill out this form here) ဖြည့်စွပ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသား သို့မဟုတ် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူများသည် ကျောင်းသား၏ ရောဂါကင်းစင်ကြောင်း အထောက်အထားစာရွက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး စာသင်ကျောင်းရုံး၏ အီးမဲလ်သို့ ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် မိတ္တူကူးပြီး စာသင် ကျောင်းရုံးခန်းသို့ ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။
မိမိကလေးငယ်အနေဖြင့် COVID-19 ကူးစက်ထားနှင့်ပြီဆိုပါက ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
မိမိကလေးငယ်အနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး၊ တစ်ဦးတည်း ခွဲနေထိုင်သည့် ရက်ပေါင်း ကျော်လွန်ပြီးသည့်တိုင် ရောဂါရှိသူနှင့် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထိတွေ့မိပါက ၎င်းတို့၏ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသည့်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ထပ်မံဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသား COVID-19 ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) နှင့် သီးခြားနေရန် စည်းမျဉ််းစည်းကမ်း စာတစ်မျက်နှာတွင် စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မိမိကလေးငယ်အနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားခြင်း မရှိပါက၊ ရောဂါရှိသူနှင့် ထိတွေ့ပြီးသည့်အခါတိုင်း မိမိကလေးငယ်အနေဖြင့် ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်ရန်၊ ကူးစက်ခံမှုကို အဖန်ဖန် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသလား။
မိမိကလေးငယ်အနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံထားခြင်း မရှိပါက၊ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရပြီးသူနှင့် ထိတွေ့မှုရှိတိုင်းတွင် ရောဂါကို ဆေးစစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိတွေ့မှု ရှိခဲ့ပြီး ၆ ရက်မြောက်နေ့တွင် ရောဂါကူးစက်မှုမရှိတော့ကြောင်း အထောက်အထားနှင့် အတူတူ ကျောင်းပြန်တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကွဲပြားသော အခြေအနေများအပေါ် အသေးစိတ် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသား COVID-19 ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) နှင့် သီးခြားနေရန် စည်းမျဉ််းစည်းကမ်း စာတစ်မျက်နှ တွင် စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်ခြင်းနှင့် တစ်ဦးတည်း ခွဲနေခြင်းကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ပါက မိမိကလေးငယ်၏ စာသင်ကြားမှုကို မည်သို့ ဆောင်ရွက် နိုင်မည်နည်း။
ကလေးငယ်အနေဖြင့် အိမ်တွင် ရှိနေစဉ် အဝေးသင်စနစ်ဖြင့် စာသင်ကြားမှုကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတန်းပိုင်ဆရာမှ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးငယ်အနေဖြင့် ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်စဉ်တွင် အစားအစာ ကျွေးမွေးသည့် အစီအစဉ်များ ဆက်လက်ရရှိမည်လား။
ရရှိပါမည်။ ကလေးငယ်အနေဖြင့် တစ်ဦးတည်း ကွာရန်တင်း (ရောဂါခြေချုပ်) ဝင်စဉ် (သို့) တစ်ဦးတည်း ခွဲနေစဉ်တွင် မိဘများအနေဖြင့် အစားအစာများကို သွားယူနိုင်အောင် Michelle Morrissey ဆီသို့ mmorrissey@battle-creek.k12.mi.us မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
မိမိအနေဖြင့် COVID-19 ဆေးစစ်ခြင်းကို မည်သည့်နေရာတွင်ပြုလုပ် နိုင်မည်နည်း။
Calhoun ကောင်တီအတွင်း COVID-19 အခမဲ့ ဆေးစစ်နိုင်မည့်နေရာများပြ မြေပုံကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် စနေနေ့မှစတင်ပြီး FDA အသိအမှတ်ပြုထားသော အထူးခွင့်ပြုမိန့်မပါသော COVID-19 ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့်နေရာများတွင် ပြင်ပကျန်းမာရေးအာမခံများနှင့်အတူ ဆေးစစ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ COVID-19 ဆေးစစ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိတွင် မေးခွန်းများရှိပါက၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျောင်းရုံးခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးပါ။
မည်သူတို့သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီပါသလဲ ။
အသက် ငါးနှစ်နှင့် အထက် မည်သူမဆို ကာကွယ်ဆေးထုံးနှံနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး (Booster shots) များအနေဖြင့်လည်း အသက် 12 နှင့် အထက်အတွက် (Pfizer) သို့မဟုတ် 18 နှင့် အထက်အတွက် (Moderna/Johnson & Johnson) ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံနိုင်ပါပြီ။ အသေးစိတ်ကို ဤနေရာတွင်လေ့လာပါ။
မိမိကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများကို မည်သည့်နေရာတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနိုင်မည်နည်း။
Calhoun ကောင်တီအတွင်းရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် လေ့လာရန် ဤ‌နေရာတွင် ကလစ်နှိပ်ပေးပါ။.
ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ရောဂါကူးစက်ခံရမှုကို လျော့ချနိုင်ရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးကို မဖြစ်မနေကာကွယ်ဆေးထိုးဖရန် တိုက်တွန်းလိုပြီး ထိုမှသာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်သွယ်မှုတွင် ရောဂါကင်းစင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် သင့်တော်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိမိသားစုအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းများ၊ စိုးရိမ်မှုများ ရှိလာပါက မိမိ၏ ပုံမှန် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ သို့မဟုတ် ကလေးအထူးကူး ထံသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများစာရင်းအတွက် allincalhoun.org သို့ သွားရောက်နိုင်သလို၊ Calhoun ကောင်တီ အများပြည်သူ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ (269) 969-6370 မှ တစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မိမိကလေးကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ဖို့ လိုအပ်သည့် ပွဲများအနေဖြင့် ယခင်သတ်မှတ်ရက်များအတွင်း ကျင်းပသွားမည်လား။
BCPS ဌာနရှိ အခမ်းအနားများကို လူဦးရေ 100 သာလျှင် တက်ရောက်ဖို့ရာ သတ်မှတ်ထားပြီး တက်ရောက်သူများအနေဖြင့် နှာခေါင်းစည်းနှင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခြားပြီး နေကြရန်စည်းမျဉ်းကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှတစ်ဆင့် ထပ်ဆင့်အသိပေးသည့် ညွှန်ကြားချက်များကို ထပ်မံစောင့်ဆိုင်းပေးပါရန် အသိပေးအကြောင်းကြားလိုပါသည်။
အားကစားပွဲများလည်း ယခင်အတိုင်း ကျင်းပမည်လား။
အားကစားပြိုင်ပွဲများနှင့် လေ့ကျင့်မှုများကို ယခင်အတိုင်း ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပွဲကြည့်ပရိသတ်များအဖြစ် ပြိုင်ပွဲဝင်သူများ၏ မိဘများ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူများသာလျှင် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးတွင် ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို လုံးဝတက်ရောက်ခွင့် ပြုမည် မဟုတ်ပါ။
Actualizaciones de Aprendizaje COVID-19
En las Escuelas Públicas de Battle Creek, la salud y la seguridad de nuestra comunidad es siempre nuestra máxima prioridad. Sabemos que es difícil hacer un seguimiento de los protocolos de salud y seguridad y otras actualizaciones dado que todo ha estado cambiando constantemente durante los últimos años.
Mientras damos la bienvenidaalos estudiantes para recibir instrucción en persona de nuevo, queremosacontinuación compartir algunas actualizaciones y recordatorios sobre los últimos protocolos referentes al COVID-19 y las respuestasaalgunas preguntas frecuentes. Esta publicación de blog se actualizará regularmente, así que no dude en marcarla para futuras referencias.
Si tiene otras preguntas o inquietudes, comuníquese con nosotros al (269) 965-9481. Para obtener asistencia en español, llame al (269) 419-1978. Para obtener asistencia en Burmese, llame al (269) 601-6029.
Protocolos de Cuarentena y Aislamiento.
Si no está seguro si su estudiante necesita aislarse o ponerse en cuarentena utilice la siguiente tabla para ayudaradeterminar la acción adecuada. Si aún así tiene preguntas comuníquese con la oficina de su escuela.
Mayor Personal de Apoyo.
A medida que los distritos escolares de todo el país continúan lidiando con la falta de disponibilidad de personal como uno de los efectos del COVID-19, incluyendo las Escuelas Públicas de Battle Creek, es posible que vean algunas caras nuevas al frente del salón de clases de su estudiante. Hemos desplegado miembros del personal de todo el Distrito Escolar para ayudararemediar la necesidad de personal en donde sea necesario para garantizar que haya maestros certificados en cada salón de clases en caso de que el personal llegueaenfermarse.
A pesar de las circunstancias difíciles, en las Escuelas Públicas de Battle Creek, seguimos comprometidos con nuestra meta de lograr el 100% de éxito para cada Bearcat, para cada estudiante.
Cuarentena significa que una persona que ha estado expuesta al COVID-19 debe quedarse en casa y alejarse de otros para evitar que la enfermedad se disperse.
Aislamiento significa que una persona que ha salido positiva para COVID-19 debe aislarse en casa, lejos de otros miembros de su hogar que no hayan salido positivos para COVID-19.
¿Cómo se define la exposición al COVID-19?
La exposición se define como un contacto cercano con alguien que salió positivo para COVID-19. De acuerdo con los lineamientos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC (por sus siglas en inglés), un contacto cercano es cualquier persona que estuvoamenos de seis pies de una persona infectada con una o más personas que no usaba mascarilla, por un total de 15 minutos o más durante un periodo de 24 horas (por ejemplo, tres exposiciones individuales de5minutes por exposición por un total de 15 minutos).
¿Qué se considera estar completamente vacunado?
Se considera que su estudiante está completamente vacunado si faltan dos semanas para recibir la segunda inyección de la vacuna Moderna/Pfizer o la vacuna Johnson & Johnson de una sola inyección. para obtener más información sobre las vacunas y la elegibilidad para vacunas de refuerzo haga clic aquí.
¿Cómo se me notificará si mi estudiante necesita ponerse en cuarentena?
Si el Departamento de Salud del Condado de Calhoun identifica que su estudiante tiene una posible exposición al COVID-19, se le notificará por correo electrónico y llamada telefónica. Si no ha recibido una comunicación directa de la escuela o del departamento de salud pública acerca de un periodo de cuarentena para su hijo, entonces su estudiante no ha sido identificado como un contacto cercano y puede regresarala escuela al día siguiente.
¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 y qué hago si mi estudiante desarrolla alguno?
Su hijo y todos los miembros de su hogar deben examinarse diariamente para detectar cualquiera de los siguientes síntomas:
Dolor de cabeza junto con otros síntomas
Si su estudiante desarrolla cualquiera de los síntomas anteriores (incluso si está vacunado), debe hacerse la prueba, comunicarse con el proveedor de atención médica de su estudiante y quedarse en casa, no asistirala escuela y apartarse de los demás.
¿Qué hago si mi estudiante sale positivo al COVID-19?
Si su estudiante recibe resultado positivoala prueba del COVID-19, comuníquese con la oficina de su escuela lo antes posible y haga que su estudiante comienceaaislarse en casa. Que se aísle durante 10 días desde el inicio de los síntomas (incluso si los síntomas comienzan después de la prueba positiva) o desde la fecha de la prueba positiva tomada el sexto día después de que comenzaron los síntomas o después de la fecha de la prueba positiva.
¿Puede mi estudiante, si sale negativo al COVID-19, terminar el aislamiento o cuarentena o necesita hacer los 10 días completos?
Su estudiante tiene la opción de regresarala escuela con el comprobante de su prueba negativa tomada el sexto día de cuarentena o aislamiento. Consulte el documento Protocolo de Cuarentena y Aislamiento de Estudiantes de COVID-19 de una página para obtener detalles sobre diferentes escenarios.
¿Necesito mostrar comprobante de una prueba negativa antes de que mi estudiante pueda regresarala escuela después del aislamiento o la cuarentena?
Si su estudiante completa un período entero de aislamiento o cuarentena de 10 días, NO necesita mostrar comprobante de una prueba negativa para regresarala escuela. Si desea que su estudiante regreseala escuela con una prueba negativa al sexto día después de que comenzó el aislamiento o la cuarentena, deberá completar este formulario aquí. El estudiante o padre/tutor puede enviar por correo electrónico el formulario y una imagen del resultado negativo de la prueba del estudianteala oficina de su escuela, o entregarlo en la oficina de su escuela junto con una copia impresa de la prueba negativa.
Para poder terminar la cuarentena o el aislamiento al sexto día, ¿importa si mi estudiante se hace la prueba de PCR o la prueba de antígeno? o ¿cualquiera de las dos está bien?
Las pruebas de antígeno pueden realizarse en el hogar o en el consultorio de un médico, mientras que las pruebas PCR generalmente se realizan en el consultorio de un médico para ser analizadas en un laboratorio. Para salir temprano de la cuarentena, siéntase libre de usar la prueba de antígeno o PCR. Sin embargo, tenga en cuenta que el CCPHD no recomienda el uso de una prueba de PCR para salir del aislamiento temprano porque estas pruebas pueden detectar partículas virales no infecciosas hasta 90 días después de que alguien se enferme inicialmente
¿Qué pasa si mi estudiante ya ha tenido COVID-19?
Incluso si su estudiante ya ha tenido COVID-19 y ha completado su periodo de aislamiento, es posible que tengan, de todos modos, ponerse en cuarentena si se les notifica que han sido expuestos, dependiendo de sus síntomas y de si están o no vacunados. Vea el documento de Protocolo de COVID-19 de una página acerca de la Cuarentena y Aislamiento para estudiantes, para detalles acerca de diferentes escenarios.
Si mi estudiante no está vacunado, ¿tiene que ponerse en cuarentena o hacerse la prueba cada vez que esté expuesto al virus?
Sí, si su estudiante no está vacunado, necesitará ponerse en cuarentena cada vez que esté expuesto al COVID-19. Tendrá la opción de regresarala escuela mostrando comprobante de prueba negativa tomada en el sexto día después de haber estado expuesto al virus. Revisar el Protocolo de COVID-19 de una página acerca de la Cuarentena y Aislamiento para estudiantes, para ver detalles acerca de diferentes escenarios.
¿Cómo vaapoder mi estudiante mantenerse al corriente en sus clases?
La maestra/o de su estudiante se pondrá en contacto directamente y ponerse de acuerdo con su estudiante para tomar clases en línea mientras esté en casa.
Si mi estudiante necesita estar en cuarentena, ¿hay comidas escolares disponibles para recoger?
Sí, si un estudiante está en cuarentena o aislamiento, los padres de familia pueden ponerse en contacto con Michelle Morrissey en mmorrissey@battle-creek.k12.mi.us para ponerse de acuerdo para recoger la comida.
¿Dónde puedo obtener una prueba del COVID-19 para mi estudiante?
Por favor vea aquí para accederaun mapa completo de los lugares de pruebas para el COVID-19 en el Condado Calhoun. A partir del sábado 15 de enero del 2022, las pruebas diagnósticas para COVID-19 de venta sin receta médica, puede que sean cubiertas por todos los seguros médicos privados. Si tiene preguntas acerca de las pruebas para el COVID-19, favor de ponerse en contacto con la oficina de su escuela.
¡Personas de cinco años de edad en adelante ya son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19! Vacunas de refuerzo están también disponibles para personas de 12 años de edad en adelante (Pfizer) o 18 años de edad en adelante (Moderna/Johnson & Johnson). Aprenda más aquí.
¿Dónde puede ponerse la vacuna mi estudiante?
Para más información acerca de otras oportunidades de vacunación en todo el Condado de Calhoun, haga clic aquí.
Animamosatodos los estudiantes que puedan,aque se pongan la vacuna contra el COVID-19 para ayudaradetener la diseminación del virus en nuestra comunidad, para que podamos así continuar la instrucción en persona de una forma segura. Si usted tiene preguntas o preocupaciones acerca de si su familia está considerando recibir la vacuna, favor de ponerse en contacto con su proveedor de salud o con su pediatra.
Para obtener una lista de preguntas frecuentes acerca de la vacuna, visite allincalhoun.org o si tiene otras preguntas, favor de llamar al Departamento de Salud Pública del Condado Calhoun al (269) 969-6370.
¿Los eventos en persona en la escuela de mi estudiante se llevaránacabo como se han programado?
Los eventos en los edificios de las Escuelas Públicas de Battle Creek están limitadosa100 personas, y se requiere el uso de mascarillas así como distanciamiento social. Favor de mantenerse al tanto para mayor información del director de la escuela de su estudiante en referenciaacualquier evento futuro en su escuela.
¿Vanallevarseacabo los eventos atléticos?
Los eventos atléticos y las prácticas continuarán como están programadas, pero el número de espectadores será limitadoalos atletas y sus padres o tutores legales únicamente. En este momento, no se permitirá la asistencia de otros estudiantes o miembros del personal escolar.